India : Tibet Sy Ny Afo Olympika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2018 13:14 GMT
Toy ny hoe tsy mety hiala ao an-tsain'ny olona izany ny momba an'i Tibet. Tibet no mbola lohahevitra mibahana indrindra amin'ny adihevitra sy nahangona fanohanana maro avy amin'ny vahoaka, indrindra fa anaty aterneto ao India. Baichung Bhutia, mpilalao baolina kitra malaza avy ao India no nandà ny hitondra ny afo olympika rehefa iny tonga tany India iny izany ny tapaky ny volana Aprily 2008. Bhutia dia Bodista avy amin'ny fanjakana Indiana ao Sikkim. Niteny tamin'ny filazambaovao Indiana i Bhutia fa io no fomba nijoroany ho an'ny vahoakan'i Tibet, ary mazava ho azy fa nanako tany amin'ireo bilaogera Indiana maro io fihetsik'i Bhutia io.
Sushbh avy ao amin'ny Insanity Rediscovered no manoratra fa ankasitrahany ny fijoroan'i Bhutia ho an'i Tibet ary ny tsy nitondrany ny afo Olympika, raha i Sudharshan manoratra hoe tsy miraharaha raha tafakatra dingana famaranana amin'ny fiadiana izau ho tompondaka erantany amin'ny baolina kitra aza ny ekipa Indiana, ary tena mirehareha tamin'ny fanapahankevitr'i Bhutia. I Patrix indray manoratra fa ela ny ela ka manana olo-malaza Indiana sahy manohitra an'i Shina isika.
Na izany aza, tsy miray hevitra ary manoratra i Avinash fa tokony horesahana ny momba an'i Tibet amin'izao fisian'ny lalao Olympika izay hetsika iraisam-pirenena izao. Ny zavatra tian'i Avinash haseho tao amin'ny bilaoginy dia ny hoe mila sarahana ny resaka Tibet sy ny Lalao Olympika ao Beijing.
Raha nanapa-kevitra ny tsy hitondra ilay afo i Bhutia, i Aamir Khan izay mpilalao sarimihetsika ao Bollywood kosa nanambara fa ho anisan'ny hitondra ny afo olympika. Ny filazàna fa nahatonga resabe ny fanapahankevitr'i Aamir Khan tsy hitondra ilay afo Olympika aloha dia tena fanamaivanan-javatra mihitsy. Khan, (angamba ilay hany mpilalao sarimihetsika Bollywood manana blaogy) nanoratra momba ny fanapahankeviny hitondra ny afo Olympika :
“Ambarako amin'ny fomba hentitra fa tena toheriko tanteraka ny endrika herisetra rehetra, ary tena malahelo mafy aho isaky misy zo fototry ny olombelona voahitsakitsaka, na aiza na aiza manerana izao tontolo izao”.
Ampiany hoe :
“Angatahako ianareo rehetra izay nangataka tamiko mba hiala lavitra amin'ny hazakazaka ifanolorana ny afo Olympika mba hahatakatra fa rehefa mandrehitra ilay afo aho ny faha 17 aprily, tsy fanohanana an'i Shina akory. Ny tena marina, hisy vavaka avy amin'ny foko ho an'ny mponin'i Tibet, sy ho an'ny mponina manerana izao tontolo izao izay iharan'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. “
Niteraka fanehoankevitra maromaro avy amin'ireo blaogera ilay lahatsoratra tao amin'ny blaogin'i Khan. Hoy i Raman's Strategic Analysis tao amin'ilay taratasiny misokatra ho an'i Aamir Khan hoe :
“Manana mpankafy an-tapitrisany maro ianao amin'ny maha fanta-daza anao manerana izao tontolo izao. Ary mbola hanana mpanohana an-tapitrisany na inona na inona fanapahankevitra raisinao farany. Kanefa maro amin'izy ireo no hahatsapa fahabangana any anaty fony noho ianao tsy nahay nanavaka ny tsara sy ny ratsy.”
Prasanna Vishwanathan avy ao amin'ny Benched@Bangalored no nahita ny fanazavan'i Khan ho “miolankolaka ” ka nanoratra hoe :
“(Khan) tsy vitany ny nanafina fa resaka ara-bola no nanosika azy tamin'ny fanapahankeviny fa tsisy fikasana ambony izany. Mety koa hoe ny famoretana ao Irak na Afghanistana ataon'i Etazonia na ny fifandiran'i NBA amin'ny governemanta Modi angamba no hanetsika ny fon'i Aamir Khan. Marika famantarana miraikitra ho an'ny intelligenstia havia liberaly ny fisafidianana izay hampararirary ny fo.”